भरतपुरमा मतगणना सुचारु
भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणनालाई लिएर दलहरुबीच १० बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शुक्रबार अबेरदेखि रोखिएको भरतपुरको मत गणना सुरु भएको छ । निर्वाचन अधिकृतले धाँधली गर्न खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले शुक्रबार साँझदेखि मत गणना बहिस्कार गरेका थिए ।...
काङ्ग्रेस–माओवादीको गठबन्धन अगाडी, २४०० मत गन्दा एमाले ७९ मतले पछि
मकवानपुर / हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १ र १९ नम्बर वडाको मत परिणाम सार्वजनिकपछि अहिले हेटौंडा २ नम्बर वडाको मत गणना भइरहेको छ । पछिल्लो समय २४०० मत गणना भएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले मेयरमा १०८७, एमालेले ७९५, राप्रपाले २७८, नया शक्तिले ६ मत प्राप्त गरेको छ । उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ७२६, एमालेले ८८६, राप्रपाले ३५६, नयाँशक्तिले १४...
भारतीय नागरिक, अमेरिकी डलरसहित पक्राउ
मकवानपुर/ मकवानपुरको हेटौंडाबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । ८६ हजार अमेरिकी डलरसहित अकिब मण्डल नाम गरेका भारतीय नागरिक पक्राउ परेको जनाइएको छ । डब्लुबी २९ बी १९५३ नम्बरको भारतीय गाडीबाट उनलाई रातोमाटेबाट नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । पक्राउ परेका भारतीय नागरिकबारे आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको...
२३०० मत गन्दा काङ्ग्रेसको अग्रता, हरिबोल महत ६० मतले पछाडी !
मकवानपुर/ हेटौंडा उपमहानगरको मेयरमा कसले बाजी मार्ला भन्नेमा अहिले खुबै चर्चा छ । सुरुमा अग्रता लिइरहेको एमाले पछिल्लो मत परिणाम पछि ६० मतले पछि परेको छ । वडा नम्बर २ को २३०० मत गन्दा एमाले पछि परेको हो । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमालेको मेयरका लागि ७५८, उप मेयरका लागि ८५५ मत प्राप्त भएको छ । काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनको १०४१ मत प्राप्त...
तीन गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमालेको जीत !
मकवानपुरमा १० वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार वटा स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएका मध्ये तीन वटा गाउपालिकामा एमाले विजयी भएको छ । एक ठाउँमा माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकाको नेतृत्व पाएको छ । मकवानपुरगढी, इन्द्रसरोवर र कैलाश गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको हो भने बागमती गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको हो ।...
मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा एमालेको जित
मकवानपुर/मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका विदुर हुमागाई विजयी भएका छन् । काङ्ग्रेसका दोर्जे लामालाई १६१ मत अन्तरमा पराजित गर्दै हुमागाईं विजयी भएका हुन् । हुमागाईले ३८१४ मत प्राप्त गरे भने दोर्जेले ३६५३ मत प्राप्त गरे । यस्तै, गाउपालिकाको उपाध्यक्षमा एमालेका हर्कमाया रुम्बाले काङ्ग्रेसकी मन्दिरा केशीलाई १० मतको अन्तरमा...
स्थानीय चुनावका मुद्दाः उम्मेदवार कि राष्ट्रिय एजेण्डा ?
आसन्न स्थानीय चुनावमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले केन्द्रबाटै विकास निर्माणका आकर्षक प्याकेज सहितका घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । विकासका मीठा सपना र नारा राखेर तयार गरिएका रंगीन घोषणा पत्रमा सपना पनि रंगीन नै छन् । स्थानीय निर्वाचन विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्ने स्थानीय तहको सरकार बनाउनका लागि हो । हजारौंको संख्यामा रहेका गाविस र...
मकवानपुरमा यी हुन् एमाले उम्मेदवार : हेटौंडा उपमहानगरको मेयरका लागि महत, उपमेयरमा मीना लामा
मकवानपुर/यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा मेयरका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा एमाले मकवानपुरबाट हरिबहादुर महत उठ्ने पक्का भएको छ । एमाले स्थायी समितीको बैठकले महतलाई हेटौंडाको मेयर बनाउने निर्णय गरेको हो । निर्णयसंगै एमालेबाट हेटौंडाको मेयरमा कसको उम्मेदवारी पर्ला भन्ने टुङ्गो लागेको छ । उप मेयरमा उपमेयरका रुपमा मीना...
अवैध बीउ वेच्नेलाई कृषि कार्यालयको छुट !
मकवानपुर/मकवानपुरको हेटौंडा ९ का झलकबहादुर रोक्काले गत फागुन १० गते हेटौंडा मेनरोडमा रहेको विकास बीज भण्डार र सन्तोष एण्ड सन्देश बीज भण्डारबाट खरिद गरिएको चैते धानको वीउ राखे । धानको विउ उम्रिएला र रोपौंला भन्ने आशमा बसेका रोक्का त्यतिबेला झस्किए जतिखेर उनले किनेर ल्याएको धानको वीउ अब उम्रिदैन भन्ने थाहा पाए । हेटौंडामा विगत लामो...